Weghachi Mac na enyemaka nke Iweghachite HD
Ike mbanye Iweghachite
1 Naghachi Data si dị iche iche Draịvụ iche
1.1 mpụga ike mbanye mgbake
1.2 HDD mgbake
1.3 SSD Iweghachite
1.4 NTFS Iweghachite
1.5 SATA Iweghachite
1.6 wakporo Iweghachite
1.7 ide Iweghachite
2 Operations ịzọpụta diski ike gị
2.1 diski ike idozi
2.2 mmepụta oyiri ike mbanye
Ma gụọ 2.3 Hichapụ ike mbanye
2.4 Idozi ike mbanye
2.5 Dochie ike mbanye
3 Naghachi data si dị iche iche na usoro / ngwaọrụ
3.1 Iweghachite HD
3.2 Mac Draịvụ Iweghachite
3.3 Linux Draịvụ Iweghachite
3.4 laptọọpụ Data Recovery
3.5 nkebi Iweghachite
4 nsogbu na draịvụ ike
4.1 Ike mbanye ọdịda
4.2 Ike mbanye okuku
4.3 mebiri emebi ike mbanye
4.4 formatted ike mbanye
The Iweghachite HD, bụ a ike mbanye nkebi na draịvụ ike na a Mac. Ọ nwere ike inweta site ịgbanyụ Mac na mgbe ahụ na ịpị ala Wụk + R igodo. Mac OS X odum na n'elu-agụnye Iweghachite mma nke nwere ike iji na reinstall sistemụ, ịrụzi diski ike ma ọ bụ weghachi usoro si a ndabere. Iji tinye mgbake mode, pịa iwu + r isi mgbe usoro reboots, ịnọgide na-ejide ha ala ruo Apple logo-egosi. Mgbake mode nwere desktọọpụ na OS X menu mmanya na ihe OS X Utilities window na nhọrọ na e depụtara n'elu. Ị nwere ike mgbe ahụ họrọ gị chọrọ nhọrọ si utilities window ma ọ bụ utilities menu dabere n'elu gị chọrọ.
Gịnị mgbake HD nwere ike inyere gị aka ime
Dị ka e kwuru na mbụ, Iweghachite HD dere oké mkpa diagnostic na nchọpụta nsogbu ngwaọrụ nke enyemaka onye ọrụ na gwara ya Mac ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-aga na-ezighị ezi. The Iweghachite HD nwere ndị na-esonụ atụmatụ:
Weghachi si Time Machine
Oge Machine bụ a pụrụ iche ndabere atụmatụ ke OS X. Time Machine na-a track nke otú gị Mac anya na otu ụbọchị ma na-eji ozi ahụ iweghachi gị Mac ọ bụla chọrọ ụbọchị na n'oge gara aga. Oge Machine-eme ndabere nke a ụbọchị, otu izu na ọbụna otu ọnwa ma mgbe nkwado ndabere na mpaghara mbanye na-aghọ zuru, ndị kasị ochie ndabere na-ehichapụ na-eme ka ndị ọzọ ohere maka ọhụrụ backups.
Ịrụzi Ike mbanye
Disk ịba uru bụ otu n'ime isi nhọrọ awa na mgbake mode. Nke a na atụmatụ nwere ike iji na ịrụzi ike mbanye nke gị Mac ozugbo ị họrọ "Rụzie Disk" nhọrọ. Mgbake HD ga-eme ka ị chọọ nchọpụta nsogbu Ama n'elu internet nakwa dị ka wepụ ọdịnaya nke ike mbanye na weghachite ya si a Time Machine azụ elu.
Wụnye / uninstall Mac OS X
Nke a bụkwa oké mma nyere site Iweghachite HD. Iji a mma ị nwere ike ibudata gị chọrọ version nke OS X n'elu internet na-enweghị chọrọ ụdị ọ bụla nke ngwa anya disk. Ma o doro anya, n'ihi na usoro a na-arụ ọrụ, ị chọrọ ka a jikọọ na internet.
Olee otú iji weghachi gị Mac iji mgbake HD
Iweghachi gị Mac iji Iweghachite HD, eso ndị a:
Ka ịnweta mgbake HD olu, Malitegharịa ekwentị gị Mac mgbe ịpị Wụk na R igodo ruo mgbe Apple logo-egosi.
Ị ga-ahụ naanị a nnọọ isi OS X interface na OS X Utilities window. Họrọ Disk Utility site na nke a window na iti "Nọgide".
Site Disk Utility window, họrọ mbụ Enyemaka taabụ wee pịa akara ngosi nke gị buut ike mbanye. Ọ bụrụ na gị buut ike mbanye bụ Iweghachite ihe atụ, pịa na draịvụ ike akara mgbake na họrọ "Rụzie Disk".
Ọ ga-ewe obere oge maka gị Mac iji nweta nile diagnostic na nchọpụta nsogbu usoro aga ma mgbe a obere mgbe ị ga-achọpụta na ọdịdị nke a window-agwa gị na mbanye e rụziri.
Kwụsịkwanụ Disk Utility site n'ịhọrọ Disk Utility → ịkwụsị Disk ịba uru, site na ịpị Wụk + Q, ma ọ bụ site na ịpị red Nso Ohere gumdrop mgbe ahụ reboot usoro na laghachi gị ọrụ.
Nsogbu na nchọpụta nsogbu maka Iweghachite HD
Mgbake HD Nzube bụ inyere ọrụ ga-esi kasị nke nchọpụta nsogbu nyere site OS X ma ihe nke i nwere ike ịhụ na mgbake HD n'onwe ya ma ọ mgbake HD onwe-ya, na-eweta nsogbu? Ọfọn, otu ihe na ị na-ekwesịghị n'ezie na-eme na-panicking. Isiokwu a na-elebara ihe ụfọdụ na-nsogbu na Iweghachite HD onwe ya na-agwa gị otú ị na-elekọta ha na-esonụ e.
Mgbake HD na-ekpochi
Mgbake HD nwere ike ina-ekpochi mgbe ụfọdụ nke a na-egosi site na ọdịdị nke ihe njehie ozi na-ekwu, "Draịvụ ekpochi". Iji tufuo nsogbu a, nanị aga disk ịba uru, pịa na draịvụ ike wee pịa 'nwee journaling' kpọghee mbanye.
Mgbake HD doesn`t Gosi elu
Mgbake HD adịghị egosi ma ọ bụrụ na i formatted gị dum ike mbanye. Iji mee ka ọ laghachi azụ, ị ga-mkpa nwere a Time Machine ndabere nke data gị ike mbanye tupu formatting mere. Eweghachiri OS na nkwado ndabere na mpaghara ga-ị gị os azụ mgbe na-Iweghachite HD azụ ị ga-mkpa na-agba ọsọ a ntakiri wụnye nke gị os iji a Mbido si internet ma ọ bụ a disk. Ọ ga-akpọlata ndị Iweghachite HD gị Mac.
Laptọọpụ Data Recovery - Olee otú naghachi Data si Draịvụ Gị laptọọpụ
Olee otú Hichapụ / ihichapu Data si Ike mbanye na Windows na Mac
Olee otú naghachi furu efu data si NTFS Draịvụ?
Otú nyefee Music ka iPhone enweghị iTunes
Otú nyefee iTunes Music si PC ka Mac
The Ultimate Guide naghachi ehichapụ faịlụ site bupụrụ Mkpofu na Mac OS X
The nduzi kasị mma ka n'ebemkpofuozi ya na otú ọ ga-enyere gị aka
Naghachi ehichapụ foto ndị si SD kaadị on Mac na windows na 3 nzọụkwụ
Ebe nchekwa Clean-The Mac Cleaner
Kid Pix Deluxe 3D maka Mac
Best iTunes Nnọchi maka Mac OS X
PowerDirector Alternative maka Mac (Mountain odum gụnyere)
MakeMKV maka Mavericks: tọghata DVD ọ bụla Video
> Resource> Mac> Weghachi Mac na enyemaka nke Iweghachite HD